I-Creative Apartment - I-Airbnb
Baia Mare, Județul Maramureș, i-Romania
Itholakala enkabeni ye-Baia Mare, endaweni ethule, i-Creative Apartment ihlinzeka ngendawo yokuhlala yokuziphekela e-Baia Mare. Le ndawo yokuhlala inombhede owodwa ophindwe kabili, ikhishi elihlome ngokuphelele elinohhavini, ifriji, amafriji, i-microwave, umshini wekhofi, iketela, i-toaster.
Igumbi lokugezela elineshawa / okugeza kanye ne-WC, i-TV, ukufinyelela kwe-inthanethi, i-WiFi yamahhala iyatholakala kuyo yonke indawo, insimbi, isomisi sezinwele. Le ndawo iseduze nesiteshi samabhasi nezitolo eziningi namabha. Sikhuluma ulimi lwakho!
I-Baia Mare iyidolobha elikhulu kunawo wonke esifundeni saseMaramureş. Izingxenye ezintsha zedolobha zingase zibonakale zingabukeki kwabanye, kodwa indawo yakudala kanye nepaki elithandekayo, izindawo ezithandekayo ezizungeze idolobha kanye nomlando othakazelisayo wendawo kufanelekile ukunakwa.
Hlola ezinye izinketho ezise- Baia Mare namaphethelo